DHAGEYSO Amaanka magaalada Garowe oo waxka badal lagu sameeyey. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Amaanka magaalada Garowe oo waxka badal lagu sameeyey.
Ciidamada Booliska maamulka Puntland gaar ahaan kuwa xasilinta ayaa lagu wareejiyay Amniga Magalada Garoowe ee Xarunta gobolka Nugaal oo todobaadyadii aan ka soo gudubnay falal amni daro ah ay ka dhaceen.
Ciidamadaan ayaa xiliyada habeenkii holwgallo amni xaqiijin ah ka sameeya Xaafadaha Magalada Garoowe,waxaana inta badan ay bartilmaameed sadaan Dhalinyaro maalmihii la soo dhaafay ku howlanaa dhaca mobelada shacabka magaaladaasi ku nool.
Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Nugaal Janeraal Muxudiin Axmed Muuse oo si KMG ah xilkaas u haya ayaa Ciidamadaas kula dardaarmay inay amaanka si weyn u adkeeyaan ayna ka hortagaan kooxaha dhibaataynaya shacabka ku nool magaalada Garowe.
Waxa uu sheegay taliyaha in Amniga Magalada uu hada wanaagsan yahay ayna inta badan gacanta ku dhigeen dhalinyaradii dadka habeenadii mobelka ka dhici jiray.
Arintaan ayaa imaanaysa ayadoo Shacabka ku nool Magalada Garoowe ee caasimada mamaulka Puntland ay todobaadyadii la soo dhaafay ka cabanayeen falal amni darro ah oo Magalada ku soo badanayay ayadoo xiliyada habeenkii ay kooxo dhalinyaro ah dhac kala kulmi jireen.
DHAGEYSO Taliska Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen doomo ay shabaabku lahaayee. →